Kuza Kwenzeka Ntoni Xa Ndisifa | Buza UThixo
Umbuzo 2: Kuza Kwenzeka Ntoni Xa Ndisifa?
UROMAN wayeseyinkwenkwana ukubhubha komhlobo wakhe osenyongweni kwingozi yemoto. Uthi: “Ukusweleka komhlobo wam kwandiphazamisa kanobom, kwakusele kudlule iminyaka yenzekile loo ngozi, ndizibuza ukuba kwenzeka ntoni kuthi xa sisifa.”
Ukufa komntu akude kuqheleke. Kungakhathaliseki ukuba sibadala kangakanani ngeminyaka, asifuni kufa. Abantu abaninzi boyika oko kuza kwenzeka emva kokuba befile.
Bawuphendula njani abanye lo mbuzo?
Bakholelwa ukuba xa umntu ebhubha kukho inxalenye yakhe eqhubeka iphila. Bakholelwa ukuba abantu abalungileyo baza kuya ezulwini, ngoxa bona abangendawo beza kohlwaywa ngonaphakade. Abanye bacinga ukuba esakubhubha umntu uyalityalwa.
Zityhila ntoni ezo mpendulo?
Impendulo yokuqala ibonisa ukuba umntu akafi ngokwenene. Eyesibini ibonisa ukuba ubomi abunanjongo. Abo babambelele kule mbono yesibini banokuba nesimo sengqondo esisesi: “Masidle size sisele, kuba ngomso siza kufa.”—1 Korinte 15:32.
IBhayibhile ayifundisi ukuba xa umntu esifa inxalenye yakhe iqhubeka iphila. UThixo waphefumlela uKumkani uSolomon ukuba abhale athi: “Abaphilayo bayazi ukuba baya kufa; kodwa abafileyo, abazi nto konke konke.” (INtshumayeli 9:5) Abo ‘bangazinto’ abayazi into eqhubekayo. Akukho nto bayivayo yaye akukho nto banokuyenza. Ngoko ke, abafi abanakubanceda okanye babenzakalise abo basadl’ amazimba.
Ngokwahlukileyo koko abantu abaninzi bakukholelwayo, uThixo wayengenanjongo yokuba abantu bafe. Wadala umntu wokuqala uAdam, wanethemba lokuphila ngonaphakade emhlabeni. Ekuphela kwexesha ekwathethwa ngalo ngokufa kuAdam kuxa wayethetha ngesohlwayo sokungathobeli. Wamalela uAdam ukutya isiqhamo somthi othile waza wamlumkisa ngelokuba ukuba angatya kuwo, “uya kufa ngokuqinisekileyo.” (Genesis 2:17) Ukuba uAdam noEva babethobele, bona nenzala yabo eyayiza kunyaniseka kuThixo babeza kuphila ngonaphakade emhlabeni.
UAdam wakhetha ukungasinanzi isilumkiso sikaThixo. Esakungamthobeli uThixo wona, waza wafa. (Roma 6:23) Ayikho inxalenye ka-Adam eyaqhubeka iphila esakuba efile. Kunoko esakufa uAdam wayeka ukuphila. UThixo wathi kuAdam: “Uya kudla isonka sokubila kobuso bakho ude ubuyele emhlabeni, kuba uthatyathwe kuwo. Ngokuba uluthuli, uya kubuyela kwaseluthulini.” (Genesis 3:19) Ekubeni bonke abantu bevela kuAdam, isono nokufa sakufumana kuye.—Roma 5:12.
Nangona uAdam wakhetha ukungathobeli, uThixo uza kuyifezekisa injongo yakhe yokuba emhlabeni kuhlale inzala ka-Adam. (Genesis 1:28; Isaya 55:11) Kungekudala, uYehova uza kubuyisela ebomini uninzi lwabantu abaye bafa. Ethetha ngelo xesha umpostile uPawulos wathi: “Kuza kubakho uvuko lwamalungisa nabangengomalungisa.”—IZenzo 24:15.
URoman, ocatshulwe ngaphambilana, wafunda iBhayibhile waza wabona oko ikufundisayo ngokufa nangoYehova uThixo. Izinto awazifundayo zamosela. Funda le ngxelo kwinqaku elithi “IBhayibhile Iyabutshintsha Ubomi Babantu”.
Wathini UYesu Ngokufa?
UYesu wayengavumelani neenkokeli zonqulo zexesha lakhe ezazisithi abazukuvuka abafi. (Luka 20:27) Engazange afundise nokuba kukho inxalenye yomntu esindayo xa esifa. Kunoko, uYesu wafundisa oku kulandelayo.
Ukufa kufana nobuthongo. Esakufa umhlobo wakhe uLazaro, uYesu wathi: “ULazaro umhlobo wethu uye kuphumla, kodwa ndiyahamba ndiya apho ukuze ndimvuse ebuthongweni.” Abafundi bakaYesu babengaqondi ukuba uthetha ukuthini. Baphendula bathi: “Nkosi, ukuba uye kuphumla, uya kuphila.” Le ngxelo ihlabela mgama isithi: “Noko ke, uYesu wayethetha ngokufa kwakhe. Kodwa bona babecinga ukuba wayethetha ngokuphumla ebuthongweni. Ke ngoko, uYesu wathi kubo ngokuphandle: ‘ULazaro ufile.’”—Yohane 11:11-14.
Abafi baza kuvuswa. Ukufika kwakhe uYesu kwidolophu yakulo Lazaro, wamthuthuzela uMarta, udade boLazaro, esithi: “Umntakwenu uza kuvuka.” Emva koko uYesu wenza esi sithembiso: “Ndim uvuko nobomi. Lowo ubonisa ukholo kum, nokuba uyafa, uya kubuyela ebomini.” Isithembiso sikaYesu sasingelolize. Phambi kwamangqina amaninzi, uYesu wamvusa uLazaro, nangona wayesele eneentsuku efile.—Yohane 11:23, 25, 38-45.
Kwisityhilelo awasinika umpostile uYohane, uYesu waphinda wathembisa ukuba abafi baza kuvuswa. Wachaza ukuba kwixesha elizayo ukufa kuza kubakhulula bonke abo basekuthinjweni.—ISityhilelo 20:13.
Kutheni uThixo eza kuvusa nabantu abangengomalungisa nje?